LUNGISA INGXAKI YOKUTHUMELA OKANYE YOKUFUMANA ISIBHALO KWI-ANDROID - ITHAMBILE
Lungisa iNgxaki yokuThumela okanye yokuFumana iSibhalo kwi-Android
Kule mihla kunye neminyaka, inkonzo ye-SMS inokuziva iphelelwe lixesha kunye ne-relic yakudala, kodwa yeyona ndlela ithembekileyo yokunxibelelana ngokubhaliweyo. Kodwa njengazo naziphi na ezinye iintlobo zetekhnoloji, ineseti yayo yeengxaki ezifuna ukusonjululwa ukuze ithembeke kwaye isebenze kakuhle. Ukungakwazi ukufumana okanye ukuthumela imiyalezo yingxaki ebambe indawo eqhelekileyo kwizixhobo ze-Android ukusukela ekuqaleni. Le ngxaki idume kakubi njengoko ixeliwe phantse kuzo zonke izixhobo ze-Android kungakhathaliseki uhlobo, imodeli, okanye inguqulelo enye.
Imiyalezo ebhaliweyo elahlekileyo okanye ilibazisekile inokuba yingxaki njengoko umsebenzisi engawuqondi umcimbi de kube kudala kakhulu. Enye yeendlela eziqhelekileyo abantu abaye baqaphela le ngxaki kuxa belindele i-OTP engafiki kwaye ngaloo ndlela ilibazisa inkqubo ekhoyo.
Unobangela wale ngxaki unokuvela kuthungelwano, isixhobo, okanye usetyenziso. Nayiphi na into enokuthi ibangele lo mba ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Kodwa, akukho mfuneko yokoyika okanye ukuxhalaba njengoko kukho ithuba elikhulu lokuba uyilungise ngokulula. Zininzi izilungiso ezinokuthi zibe kho kule ngxaki. Zonke ezi zidweliswe ngezantsi ukukunceda ukuba uthumele kwaye ufumane iitekisi ngaphandle kwenkathazo.
Ngaphambi kokuba siqhubele phambili ukulungisa ingxaki, kubalulekile ukuba uqonde ubume bengxaki ngokwayo. Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, kukho amacandelo amathathu adlala indima kwimiyalezo ebhaliweyo: isixhobo, usetyenziso, kunye nenethiwekhi. Iingxaki ezincinci kuyo nayiphi na into inokophula inkqubo yokunxibelelana ngokubhaliweyo.
Iingxaki ngeNethiwekhi : Umyalezo obhaliweyo ufuna uqhagamshelo lwenethiwekhi oluluqilima noluthembekileyo ukuze lusebenze kakuhle. Ukuphazamiseka apho nangayiphi na indlela kunokukhokelela kule ngxaki.
Iingxaki nezinye iSicelo soMyalezo : I-Android yaziwa ngokuba nokwenzeka kakhulu kwaye uluhlu lwayo oluninzi lwezicelo zomntu wesithathu. Ungquzulwano lwenkqubo kunye nolunye usetyenziso lomyalezo olufakwe kwisixhobo lunokukhokelela kule ngxaki kunye neecache zesicelo esonakeleyo, uhlaziyo oludlulelwe lixesha, njl.
Iingxaki ngesixhobo : Ezi zinokuba kwimeko yokunqongophala kwendawo yokugcina kwisixhobo okanye ubukho beentsholongwane kunye nezinye i-malware ezinokuthi zithintele imiyalezo ekugcinweni. Isixokelelwano esinomthwalo ogqithisileyo okanye uhlaziyo lwesixokelelwano oluphelelwe lixesha lunokubangela ukuba isixhobo singasebenzi kakuhle.
Ungayilungisa njani ingxaki yokuthumela okanye yokufumana isicatshulwa kwi-Android?
Indlela yoku-1: Jonga amandla ophawu lwakho lwenethiwekhi
Indlela yesi-2: Khangela ukuba isicwangciso sakho sedatha
Indlela yesi-3: Cima imo yenqwelomoya
Indlela yesi-4: Khubaza indlela yokugcina amandla
Indlela yesi-5: Qala kwakhona isixhobo sakho
Indlela yesi-6: Jonga amanani avaliweyo
Indlela yesi-7: Sula i-Cache
Indlela yesi-8: Cima imiyalezo engafunwayo kwifowuni yakho
Indlela ye-9: Cima imiyalezo kwiSIM khadi yakho
Indlela ye-10: Cima iMessage
Indlela ye-11: Guqula i-app oyithandayo yokuthumela imiyalezo
Indlela ye-12: Sombulula iingxabano zesoftware
Indlela ye-13: Hlaziya i-Android
Indlela ye-14: Faka kwakhona iSIM khadi yakho
Indlela ye-15: Seta kwakhona useto lwakho lweNethiwekhi
Indlela ye-16: Bhalisa kwakhona inethiwekhi yakho yeselula
Indlela ye-17: Jonga kunye nomboneleli wakho weNethiwekhi yeSelula
Indlela ye-18: Yenza iFactory Reset kwisixhobo sakho
Njengoko kukho izizathu ezininzi zengxaki, zininzi izisombululo ezinokubakho zokuhambelana. Banokuqala ukusuka ekubalekeni ngokungxama ukujikeleza indlu yakho ukukhangela iinethiwekhi zeselula ukuya ngokulula okanye ukuvala useto ngokucofa okumbalwa.
Ngamnye uye ngeendlela ezidweliswe ngezantsi de ufumane isisombululo. Sincoma ukuba ube nefowuni esecaleni ukuze ukwazi ukuvavanya ukuthumela nokufumana imiyalezo phakathi kwezixhobo.
Kanye njengokuthumela imiyalezo kwizicelo ezinje nge WhatsApp I-Messenger, WeChat, Line, kunye nokunye kufuna uqhagamshelo lwe-intanethi olugudileyo ukuze lusebenze, iSMS ifuna uqhagamshelo oluluqilima lwenethiwekhi yeselula. Isiginali ebuthathaka sesona sizathu silula kwaye esona sizathu sinokwenzeka sokuba umsebenzisi angakwazi ukuthumela okanye ukufumana isicatshulwa.
Iinethiwekhi eziphathwayo zinokungacingelwa ngamanye amaxesha, jonga phezulu kwesikrini kwaye ubone ukuba zingaphi iibar onazo ukumisela amandla omqondiso. Inethiwekhi yefowuni ephathwayo okanye ulwamkelo ngamandla omqondiso (kulinganiswa nge-dBm) efunyenwe ngeselfowuni esuka kwinethiwekhi yeselula.
Amandla omqondiso axhomekeke kwizinto ezahlukeneyo ezinje ngokuba kufutshane kwinqaba yeseli, nakuphi na ukuthintelwa okubonakalayo okunje ngeendonga, izakhiwo, imithi phakathi kwakho kunye nenqaba yeseli, njl.
Ukuba unokubona imivalo embalwa kuphela emva koko umqondiso ubuthathaka kakhulu ukuthumela okanye ukufumana i-SMS, zama ukufumana indawo ephezulu okanye inyathelo ngaphandle ukuba kunokwenzeka. Ungaya ngasefestileni okanye kwicala apho uhlala unophawu olunamandla.
Ukuba imivalo igcwele, ngoko uyazi ukuba inethiwekhi yeselula ayinayo ingxaki kwaye unokuqhubela phambili kwisinyathelo esilandelayo.
Ukuba uqhagamshelo lwenethiwekhi yakho yomelele kwaye awukwazi ukuthumela okanye ukufumana imiyalezo, kunokwenzeka ukuba isicwangciso sakho sedatha sangoku siphelelwe lixesha. Ukujonga oku, unokuqhagamshelana nomphathi wakho kwaye uyihlaziye xa kukho imfuneko. Oku kufuneka kuzisombulule iingxaki zokuthumela okanye ukufumana imiyalezo ebhaliweyo kwi-Android.
Ukuba imowudi yenqwelomoya ivulwe ngabom okanye ngempazamo, iya kukuyeka ekusebenziseni idatha yeselula kunye noqhagamshelo lwelizwi ngefowuni yakho. Awunakukwazi ukufumana okanye ukuthumela imiyalezo kunye neefowuni, njengoko uya kuqhagamshelwa kuphela Wi-Fi .
Ukuyicima, vele ukhuphe ipaneli yokuseta ngokukhawuleza ukusuka phezulu kwaye ucofe i icon yenqwelomoya.
Ukuba awukwazi ukufumana ukhetho apha, vula useto lwefowuni yakho kwaye ufumane indawo 'I-Wi-Fi kunye ne-Intanethi' ukhetho.
Kweli candelo, cofa kwiqhosha lokuguqula elibekwe ecaleni kwayo 'Imo yenqwelomoya' ukuyicima.
Kwezinye iimeko, imowudi yokugcina amandla ye-Android ikhubaza usetyenziso olungagqibekanga lokugcina ibhetri. Yicime, qinisekisa ukuba ifowuni yakho inentlawulo eyaneleyo, kwaye ngoku jonga ukuba uyakwazi ukuthumela okanye ukufumana imiyalezo kwakhona.
Ukuqalisa isixhobo kwakhona kubonakala ngathi isisombululo somlingo ekulungiseni nayiphi na ingxaki yobugcisa kwisixhobo, kodwa sisekelwe kwinyani kwaye sihlala sisona silungiso esihle. Ukuqalisa isixhobo kwakhona kuvala kwaye kusete ngokutsha nayiphi na inkqubo yangasemva enokuthi ithintele ukusebenza kwesixhobo sakho. Cima ifowuni yakho imizuzu embalwa phambi kokuba uyivule emva koko uzame ukuthumela umyalezo.
Ukuba uyazi ukuba umntu othile uzama ukunxibelelana nawe ngomyalezo obhaliweyo kodwa akakwazi, unokufuna ukujonga ukuba inombolo yakhe ivaliwe ngempazamo okanye hayi.
Inkqubo yokukhangela ukuba inani liye longezwa ngokungeyonjongo kuluhlu lwe-SPAM lulula ngokufanelekileyo.
1. Vula usetyenziso lokufowuna olungagqibekanga lwefowuni yakho. Cofa kwi 'Imenyu' iqhosha elibekwe phezulu ekunene kwaye ukhethe i 'Iisetingi' ukhetho.
2. Skrolela ezantsi ukufumana ukhetho olubizwa 'Iisethingi zokuvala' (okanye naluphi na ukhetho olufanayo ngokuxhomekeke kumenzi wesixhobo sakho kunye nesicelo.)
3. Kwimenyu engaphantsi, cofa ku ‘Amanani avaliweyo’ ukuvula uluhlu kwaye ukhangele ukuba inani elithile likhona apho.
Ukuba awukwazi ukufumana inani apha, ngoko ungalawula oku kunokwenzeka kwaye uye kwindlela elandelayo. Nje ukuba ugqibile, jonga ukuba uyakwazi lungisa ingxaki yokuthumela okanye yokufumana imiyalezo ebhaliweyo kwi-Android.
I-Cache inceda i-smartphone ikhawulezise iinkqubo zakho zemihla ngemihla. Ukuba ezi fayile zonakala, ulwazi olugciniweyo luya kuxutywa kwaye lunokubangela imiba efana nale ijongene nayo ngoku. Iicache ziyaziwa ngamanye amaxesha ukubangela ukungqubana kwesicelo kunye nokunye ukuziphatha okugwenxa. Ukucoca ezi zinto ngamaxesha athile kulungile ekusebenzeni ngokubanzi kwesixhobo sakho kwaye kukunceda ekukhululeni indawo yokugcina exabisekileyo.
Ukucima i-cache, vula useto lwefowuni yakho kwaye ucofe 'Usetyenziso kunye neSaziso' . Fumana isicelo sakho sokufowuna esingagqibekanga kwaye uhambe ngokwakho kwindawo yokugcina kunye nokhetho lwe-cache. Ekugqibeleni, cofa iqhosha 'Cima iCache' iqhosha.
Iitekisi zokunyusa ezicaphukisayo, OTPs , kunye neminye imiyalezo engalindelekanga inokuthatha indawo eninzi kwaye igcwalise ifowuni yakho. Ukucima yonke imiyalezo engafunekiyo kunokusombulula umba okhoyo kuphela kodwa kudala indawo kunye nokuphucula ukusebenza kwesixhobo siphela.
Inkqubo yokucoca iyahluka kwifowuni ukuya kwifowuni, kodwa inamanyathelo ambalwa afanayo. Kodwa ngaphambi kokuba uqhubele phambili, sincoma ukuba ukope kwaye ugcine nayiphi na imiyalezo ebalulekileyo kwindawo eyahlukileyo. Unako kwakhona ukuthatha screenshots ukugcina iincoko.
Vula usetyenziso lwemiyalezo eyakhelweyo kwifowuni yakho.
Ngoku, cofa ixesha elide kwincoko onqwenela ukuyicima.
Nje ukuba ubone ibhokisi yokukhangela, uya kukwazi ukukhetha iincoko ezininzi ngaxeshanye ngokucofa nje kuzo.
Nje ukuba ukhethiwe, yiya kukhetho lwemenyu kwaye ucofe ukucima.
Ukuba ufuna ukucima yonke imiyalezo, phawula 'Khetha Zonke' uze ucofe 'Cima' .
Imiyalezo yeSIM khadi yimiyalezo egcinwe kwikhadi lakho hayi kwimemori yeselula yakho. Ungayisusa le miyalezo esuka kwiSIM khadi uyise kwifowuni yakho, kodwa hayi ngolunye uhlobo.
Ukuba awuthathi ixesha lokuzicima, kunokuba neziphumo ezibi kakhulu njengoko zivala indawo yekhadi lakho leSIM.
Vula usetyenziso lwemiyalezo emiselweyo kwifowuni yakho.
Cofa i icon yamachaphaza amathathu phezulu ekunene ukuze uvule ifayile Iisetingi imenyu.
Khangela i ‘Lawula imiyalezo yekhadi leSIM ' ukhetho (okanye into efanayo). Ungayifumana ifihliwe ngaphakathi kwethebhu yokuseta kwangaphambili.
Apha uya kufumana ukhetho ukucima yonke imiyalezo okanye ezimbalwa kuphela ezithile.
Nje ukuba ukhulule indawo, khangela ukuba uyakwazi ukuthumela okanye ukufumana imiyalezo.
Le yingxaki enokubakho ukuba ungumsebenzisi we-Apple owayesandula ukutshintshela kwisixhobo se-Android, njengoko imisonto ye-iMessage ayiguquleli kwi-Android. Ingxaki ixhaphake xa umsebenzisi we-iPhone ebhalela wena, umsebenzisi we-Android, ongabhaliswanga kwi-iMessage. I-bug ivela njengoko inkqubo ye-Apple inokusilela ukuqaphela ukuba utshintsho lwenziwe kwaye iya kuzama ukuhambisa isicatshulwa nge-iMessage.
Ukulungisa lo mba, kuya kufuneka ucime ngokulula ubhaliso kwi-iMessage. Inkqubo yokucinywa kubhaliso ilula kakhulu. Qala ngokundwendwela Iwebhusayithi ye-iMessage Deregister yeApple . Skrolela ezantsi kwicandelo elinesihloko esithi ‘Akusenayo i-iPhone yakho?’ kwaye ufake inombolo yefowuni yakho. Landela imiyalelo ekhankanywe kwaye uya kulungela ukuhamba.
Ukuba unezicelo ezininzi zokuthumela imiyalezo kwifowuni yakho, enye yazo iqhele ukusetwa njengemiyo okanye ekhethwayo. Umzekelo, ukuseta Truecaller njengesicelo osikhethayo endaweni yeyo eyakhelwe-ngaphakathi. Ukungasebenzi kakuhle kwezi zicelo zomntu wesithathu kungakhokelela kwingxaki ekhankanyiweyo. Ukutshintsha usetyenziso lwakho lokuthumela imiyalezo ukubuyisela kwisicelo esakhelwe ngaphakathi kunokukunceda ukusombulula ingxaki.
I-Android yaziwa ngokuba yinto enokwenzeka kakhulu, kodwa ukuba nezicelo ezininzi zemisebenzi efanayo kuhlala kungumbono ombi. Ukuba unesicelo esingaphezulu kwesinye seqela lesithathu lokuthumela imiyalezo, ukungquzulana kwesoftware kuya kwenzeka phakathi kwabo. Ungazama ukuhlaziya ezi zicelo kwaye ulinde ukuba iibugs zilungiswe. Kungenjalo, unako cima inkqubo yomntu wesithathu ngokupheleleyo kwaye unamathele kwindawo eyakhelwe-ngaphakathi njengoko isebenza ngokubanzi kwaye ithembekile.
Ukuhlaziya inkqubo yefowuni yakho Isenokungabonakali ifanelekile ekuqaleni ingxaki yangoku, kodwa uhlaziyo lwesoftware lubalulekile njengoko lulungisa iibugs kunye nemiba ejongene nabasebenzisi bayo. Olu lungiso lunokujongana nemisebenzi okanye iimpawu zesicelo sakho sokuthumela imiyalezo. Nje ukuba ugqithele kuhlaziyo lwesixokelelwano esisaseleyo, jonga ukuba uyakwazi na ukuthumela okanye ukufumana itekisi kwakhona.
Ukuba i-SIM khadi ayibekwanga ngokufanelekileyo kwindawo yayo echongiweyo, inokubangela imiba yoqhagamshelwano. Oku kunokukhutshwa ngokulula ngokufaka kwakhona iSIM khadi ngokuqinileyo endaweni yayo.
Ukwenza oku, okokuqala, cima ifowuni yakho kwaye ukhuphe iSIM khadi kwitreyi yayo. Linda imizuzu embalwa phambi kokuba uyibuyisele ngaphakathi kwaye uvule isixhobo. Ukuba unesixhobo esiphindwe kabini seSIM, ungazama ukusibeka kwindawo eyahlukileyo. Ngoku, vavanya ukuba umcimbi ulungisiwe.
Ukuba ubona nawuphi na umonakalo obonakalayo kwiSIM khadi, unokufuna ukuyibuyisela endaweni yayo ngoncedo lomboneleli wakho wesevisi.
Ukuseta kwakhona useto lwenethiwekhi yakho yindlela ehlaselayo yokusombulula ingxaki njengoko oku kuya kucima zonke iisetingi zenethiwekhi kwisixhobo sakho. Oku kubandakanya nawaphi na kunye nawo onke amagama agqithisiweyo eWi-Fi, ukudityaniswa kweBluetooth, kunye nolwazi lwedatha yeselula egciniweyo. Landela ngononophelo le ndlela ingezantsi ukuseta kwakhona useto lwenethiwekhi yakho yeselula. Gcina ukhumbula ukuba zonke iipassword zakho zeWi-Fi ezigcinwe kwisixhobo sakho ziya kucinywa, ke kuya kufuneka uqhagamshele kuyo nganye kwakhona.
1. Vula i Iisetingi usetyenziso kwisixhobo sakho, khangela i 'Inkqubo' ukhetho ngaphakathi kwayo, kwaye ucofe okufanayo.
2. Kuseto lwesixokelelwano, cofa kwi 'Setha ngokutsha iinketho'.
3. Ekugqibeleni, nqakraza kwi 'Seta kwakhona i-Wi-Fi, iselula kunye neBluetooth' ukhetho.
Uya kucelwa ukuba uqinisekise isenzo sakho, emva koko inkqubo yokusetha kwakhona iya kuqalisa. Lindela ixesha ukuze igqitywe kwaye emva koko ujonge ukuba uyakwazi lungisa ingxaki yokuthumela okanye yokufumana imiyalezo ebhaliweyo kwi-Android.
Ngamanye amaxesha ifowuni yakho isenokungabhaliswanga ngokuchanekileyo kwinkonzo yenethiwekhi. Ukususa kunye nokufaka ikhadi lakho leSIM kwenye ifowuni kugqithisa useto lobhaliso lwenethiwekhi. Ngenxa yoko, kufanelekile ukudutyulwa.
Cima ifowuni yakho kwaye ukhuphe ngononophelo iSIM khadi kwindawo yayo. Ngoku, yifake kwenye ifowuni kwaye uyivule. Qinisekisa ukuba isignali yeselula iyasebenza. Gcina iselula ivuliwe malunga nemizuzu emi-5 phambi kokuba uyicime kwakhona kwaye ukhuphe iSIM khadi. Okokugqibela, yifake kwakhona kwisixhobo esinengxaki kwaye uyivule kwakhona ukujonga. Oku kufuneka kuqwalaselwe kwakhona ubhaliso lomsebenzi womnatha.
Ukuba akukho nto ikhankanywe ngasentla esebenzayo, ingalixesha lokuba uqhagamshelane nomboneleli wakho wenkonzo ukuze ufumane uncedo olungaphezulu kunye nezikhokelo. Unokubatsalela umnxeba kwaye uchaze ingxaki kumsebenzisi okanye undwendwele iwebhusayithi yabo ukukhangela naziphi na izilumkiso okanye uhlaziyo olunxulumene nemiba yenethiwekhi.
Ukuba akukho nto ikhankanywe ngasentla ikusebenzele, le yindawo yakho yokugqibela kunye neyokugqibela. Ukusetha ngokutsha kwefektri kunokulungisa lo mba njengoko isusa yonke idatha kuquka i-glitches, iintsholongwane, kunye nayo nayiphi na enye i-malware ekhoyo kwisixhobo sakho.
Ngaphambi kokuba wenze ukusetha kwakhona kwefektri, khumbula ukugcina kunye nokugcina yonke idatha yakho yobuqu kwindawo ekhuselekileyo. Inkqubo yokusetha kwakhona ilula kodwa kubalulekile ukuyenza ngokuchanekileyo.
1. Vula i Iisetingi isicelo kwisixhobo sakho kwaye uhambe ngokwakho ukuya kwi Inkqubo izicwangciso.
2. Khangela kwaye ucofe i 'Seta kwakhona' ukhetho.
3. Skrolela ezantsi kwaye ucofe ku ' Ukuphindisela kwisetingi sefetri ' ukhetho. Ngeli xesha, uya kucelwa ukuba ufake igama lokugqitha isixhobo sakho. Qinisekisa esi senzo kwakhona kwi-pop-up evelayo kwaye ulinde ukuba inkqubo igqitywe. Ukuseta ngokutsha isixhobo kwifektri kunokuthatha ixesha ukuze ube nomonde.
4. Nje ukuba ifowuni yakho iqale kwakhona kwaye ihamba kwinkqubo yokuseta ngokubanzi, kufuneka uqale ukufumana imiyalezo ebhaliweyo kwakhona.
Ungayivimba njani inombolo yefowuni kwi-Android
Iibrowser ezili-17 ezilungileyo zeAdblock ze-Android (2020)
Ukulungiswa kweNtengiselwano ayinakugqitywa kwiVenkile kaGoogle Play
Sazise ukuba yeyiphi kwezi ndlela zingasentla ekuncedeyo ukusombulula iingxaki ngelixa uthumela okanye ufumana imiyalezo ebhaliweyo kwisixhobo sakho se-Android.